Barashada mashiinku waa ku dhaqanka falanqaynta xogta ee farsameysa dhismaha qaabka falanqaynta. Mashiinka barashada oo si joogto ah u sii wada barashada si uu falalkiisa u ilaaliyo mid sax ah oo aragti cusub laga helo ayaa ah nidaam barasho mashiin dhab ah. Xogta waxaa lagu quudiyaa mashiinka barashada iyadoo la adeegsanayo ficil kasta iyo quudinta ficil la aanta ah ka dibna hawsha si otomaatig ah ayey u socotaa iyada oo aan si joogto ah looga baahneyn faragelin dad ama mid gacanta ah. Barashada mashiinka ayaa u ogolaatay kombiyuutarada inay helaan aragtiyo qarsoon, iyadoo la adeegsanayo algorithms-ka oo si isdaba joog ah uga hela xogta la siiyay, iyadoon si cad loo baarin meesha laga raadinayo. Barashada mashiinka ayaa daaha ka qaadi karta istiraatiijiyado cusub iyo wax soo saar nidaamyo kala duwan oo ay ka mid yihiin IT, daryeelka caafimaadka, saadka, tamarta iyo xitaa waxbarashada. Heerarka wax ku oolka ah ee aan horay loo arag waxaa lagu gaari doonaa nidaamyada ganacsiga algo-iskaa wax u barashada, iyo heer shaqsiyeed, aaladaha casriga ah ayaa runtii noo tilmaami doona wax kasta waxayna gacan ka geysan doonaan fududeynta nolosheena. Barashada mashiinku waa saynis aan haba yaraatee wax cusub ahayn laakiin hadda hela dardar cusub.
Barashada mashiinka maanta maahan sida ay ahaan jirtay waagii hore, taas oo ay ugu wacan tahay tiknoolajiyada cusub ee xisaabinta. Maaddaama moodellooyinku u soo bandhigayaan xog cusub, qaybta is-dhexgalka ee barashada mashiinka ayaa aad muhiim u ah maadaama ay awood u leeyihiin inay si madaxbannaan ula qabsadaan. Waxay soo saaraan natiijooyin soo noqnoqda, la isku halleyn karo iyo go'aanno iyagoo wax ka baranaya xisaabtii hore ee iyaga la siiyay. Barashada mashiinka waxay ka dhalatay fikradda ah in kumbuyuutarradu awood u leeyihiin inay wax bartaan iyadoo aan si dhab ah loo qorsheynin wax shaqo ah oo gaar ah oo ay ku shaqeeyaan, taasi waa aqoonsi qaab ah cilmi-baarayaashu waxay dejinayaan qaabab ay ku arkaan haddii kumbuyuutarradu ay wax ka baran karaan xogta iyada oo loo marayo sirdoonka farsamada. Dadku waxay dib u soo nooleeyeen xiisihii ay u qabeen barashada mashiinka sida falanqaynta Bayesian iyo macdanta xogta dhowr arimood sida keydinta xogta la awoodi karo, farsamaynta xisaabinta oo aad u awood badan kana raqiisan iyo noocyo sii kordhaya iyo mugga xogta la heli karo. Waxyaalahan oo dhami waxay suurta geliyeen in si otomaatig ah oo dhakhso leh loo dhiso moodello falanqayn kara xog aad u adag oo ka weyn kana soo saari kara natiijooyin sax ah oo dhakhso leh baaxad weyn haddii loo baahdo. Iyadoo la abuurayo moodello sax ah, ganacsiyada iyo ururradu waxay leeyihiin fursad wanaagsan oo ay ku aqoonsadaan fursado faa'iido iyo guul leh isla markaana ay yareeyaan halista taasoo ka dhigaysa barashada mashiinka cunsur muhiim u ah warshadaha aasaasiga ah.
Barashada mashiinku waxay sahlaysaa nidaamyada garashada si ay ula falgalaan, u fakaraan oo ay noola bartaan qaab shaqsiyeed iyo dabiici ah. Ka fikir ganacsiyada saamiyada, Netflix talooyinka filimka, xayeysiisyada internetka ee soo bandhiga iyadoo lagu saleynayo caadooyinkayaga daalacashada - kuwani dhammaantood waa tusaalayaal sida barashada mashiinka ay nooga caawineyso inaan adduunka ugu baaro siyaabo awood leh oo hal abuur leh. Horaantii, u leexashada taariikhda aadanaha waxay ahayd kacaankii warshadaha kaasoo u suurta galiyay warshadaha inay abuuraan shaqooyin badan iyagoo noqda kuwa wax soo saar badan leh sidaasna kor ugu qaadaya heerka nolosha guud. Maanta, barashada mashiinku waa kacaan kale oo adduunku wajahayo. Waxaan qarka u saaran nahay otomaatig iyo caqli macmal ah oo ah furaha ciyaartooyda hadii wax hagaagaanna, barashada mashiinka waxay ka caawinaysaa shirkadaha inay kobciyaan ganacsigooda isla markaana ay isla markiiba horumariyaan fikradaha. Sida Kacaankii Warshadaha, qaybta ugu muhiimsan ee barashada mashiinku waa iskaashi- waxaan ubaahanahay shaqaale xariif ah oo wadajira kana shaqeeya geedi socod guuleysi leh oo siinaya kaliya wax soo saar sax ah. Shaqaalaha halkaan looga hadlayo waxay lahaan doonaan injineerada xogta, naqshadayaasha IT-ga, dadka isticmaala ganacsiga, saynisyahannada xogta, khubarada macdanta xogta, maamuleyaasha nidaamka, maamulayaasha, horumariyeyaasha, iwm.
Waxaan si fiican uga warqabnaa codsiyada barashada mashiinka ee maanta nolosheenna ka socda. Muddo dheer, algorithms-ka barashada mashiinka ayaa jiray laakiin waxa dhawaanahan soo ifbaxay waxay ahayd awooda si toos ah loogu dabaqi karo xisaabinta xisaabta adag ee xogta weyn, dhaqso badan iyo marar badan. Mid ka mid ah tusaalooyinka aan hore u naqaanay waa gaariga iswada ee Google, oo si weyn loo buunbuuniyey kuna saleysan barashada mashiinka. Waxay leedahay dhammaan astaamaha baabuur casri ah oo la isku daray sida xakamaynta maraakiibta la-qabsiga, kaaliyeyaasha baabuurta la dhigto iyo badmaaxiinta, aqoonsiga hadalka iyo kaaliyaha haadka taas oo ka dhigaysa mid u dhow gaari gebi ahaanba madax-bannaan oo shaqeynaya. Sidoo kale talobixinta khadka tooska ah waxay bixisaa sida kuwa ka socda Netflix iyo Amazon, ogaanshaha khayaanada iyo isku darka barashada mashiinka iyo abuurista qawaaniinta luqadeed si loo ogaado waxa macaamiisha ay kaaga sheegayaan Twitter-ka, Nanotronics, oo otomatigga sameeya mikroskoobyada kormeerka hagaajinta, Rethink Robotics iyadoo la adeegsanayo si loo horumariyo wax soo saarkooda xawaare iyo tababbar gacmahooda aaladaha, kordhinta saxnaanta qeybta macaamiisha, saadaalinta qiimaha macaamilka inta uu nool yahay, saamaxaya khibrada barnaamijka ee adeegsadaha, ogaanshaha qaababka wax iibsiga macaamiisha, qiimeynta halista caafimaad, hagaajinta daryeelka shakhsi ahaaneed, iyo baaritaanka cudurada si sax ah waa sawirada maalin kasta ee mashiinka barashada.
Nidaamka barashada mashiinka wanaagsan waxaa abuuray algorithms aasaasi ah oo horumarsan, isugeyn, awood u lahaanshaha diyaarinta xogta, qaabeynta isu imaatinka iyo otomatiga iyo howlaha socodsiinta. Barashada mashiinka dhawaanahan waa wax badan oo war ah sababtoo ah horumarkiisa “barashada qoto dheer” oo ay kujirto guuldaradii caanka ahayd ee loo yaqaan 'AlphaGo' ee ka soo gaadhay Ayeeyadi Go Lee Sedol iyo alaabooyin kale oo cusub oo cajaa'ib leh oo ku saabsan tarjumaada mashiinka iyo aqoonsiga muuqaalka. Barashada mashiinku waxay cuntaa xog fara badan, waxay ka cafis badan tahay bedelida dhibcaha xogta ama xuduudaha waxayna taageertaa kakanaanta iyo kala duwanaanta weyn. Waxsoosaarka la soo saaray ee nidaamyadan ayaa si siman loogu adeegsan karaa dhufto kala duwan oo kala duwan, sida nidaamyada falanqaynta, xisaabinta daruuraha, shabakadaha cirifka iyo nidaamyada gundhigga ah. Isbeddel tallaabo ah oo laga sameeyay xilligii fikraduhu ay u badnaayeen teknoolojiyadda loo kaxeeyay xilligii garashada, taas oo awood u siineysa fikradaha ganacsiga ku dhisan. Barashada mashiinka, IoT iyo AI waa nooc isku xiran midba midka kale. IoT si qurux badan ayey u dhameystireysaa sirdoonka macmalka ah marka ay timaado xisaabinta waqtiga-dhabta ah. Aadamuhu si dhakhso ah ayaa gebi ahaanba loogu beddelayaa mashiinnada socodka oo aad uga caqli badan innaga. Mashiinnada ayaa durba bilaabay inay ku dhex wareegaan meheradaha ujeedooyin kala geddisan, waqtiga soo socdana, waxaan arki doonnaa mowjad isbeddel farsamoyeed oo isbadal ku keenaya nolosheena maalinlaha ah. Dhaqdhaqaaqyadan aadanaha waxay wax ka beddeli doonaan hababka aan nolosha u eegeyno iyadoo la dhisayo aragtida laga helayo xogta ay helaan iyo qaababka aadanuhu weligiis awoodin. Tani waxay ka dhigan tahay in mashiinadu dhab ahaan ka badin doonaan xoogga aadanaha in ku dhow wax kasta oo keena isbeddelka hannaanka, keydinta kharashka iyo heerarka waaweyn ee geesinimada leh ee otomatiga. Nidaamyada aqoonsiga muuqaalka iyo codka ayaa aqoonsan doona shakhsiyaadka ka soo baxa marinnada kala duwan sida ku xusan sahan, shirkadaha sida ugu dhakhsaha badan u koraya waxay lahaan doonaan mashiinno ka caqli badan shaqaalaha.
Ugu horreyntii waxaa jira saddex nooc oo kala duwan oo ah barashada mashiinka oo la kormeero, aan kormeerin, iyo xoojinta barashada. Kuwaan waxaa loo doortaa iyadoo kuxiran howsha si loo dhameystiro loona fududeeyo howsha. Barashada la kormeero, algorithm -ka barashada ayaa durba la siiyay jawaabta inta la akhrinaayo xogta ah natiijada saxda ah ee dhibic kasta oo xog ah ayaa si cad loo calaamadeeyay markii la tababarayo tusaalaha. Waxay doonaysaa inay hesho xiriirka halkii ay ka heli lahayd jawaabta si ay si sax ah u saadaaliso ama u kala saarto dhibcaha xogta marka dhibcaha xogta aan la qoondeyn la bilaabo. In Barashada aan la ilaalin, algorithm -ka barashada lama siinayo jawaabta inta lagu jiro tababarka qiimihiisuna wuxuu ku jiraa helitaanka isku xirnaanta iyo qaababka. Waxay ujeeddadeedu tahay in la helo xiriir macno leh oo u dhexeeya dhibcaha xogta. Nooca ugu dambeeya waa barashada xoojinta oo ah isku dhafka u dhexeeya barashada kormeerka iyo kormeerka. Waxay ubaahantahay isku xirnaanshaha deegaanka waxaana loo isticmaalaa in lagu xaliyo mashaakilaad ka adag kuwii hore. Tusaalooyin yar oo caan ah ayaa ah dib-u-heshiisiin, turub, iyo Go, waa ciyaaraha macquulka ah iyo xogta waxaa bixiya deegaanka si wakiilka ugu oggolaado inuu uga jawaabo oo uu keligiis wax u barto.